January 2012 ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Tuesday, January 24, 2012
shortcut တွေ ပုံစံတူလိုက်ပွားနေတဲ့(folder, .exe) virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ.
စိုင်းစိုးလှိုင် : မင်္ဂလာပါ ကိုညီ . ကျွန်တော်က ကိုညီနေမင်း သင်ပေးနေတဲ့ နည်းပညာတွေကို ခံယူနေတဲ့ ညီငယ်ပါ။ အခု ကျွန်တော့်စက်က ပြသနာတက်နေလို့ ကူညီပါဦး ကိုညီ... desktop နှင့် စက်ထဲရှိ ဖိုင်အားလုံး Shortcut တွေဖြစ်နေပါပြီ.... ဖွင့်လို့လဲမရတော့ဘူး... အဲ့ဒါ ၀င်းဒိုးမတင်ပဲနဲ့... ဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများရှိရင် ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါဦး ကိုညီ....
အဲ့ဒီ့ virus ကို သတ်မယ့်အကြောင်း မပြောခင်မှာ အဲ့ဒီ့ virus ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ အရင်ပြောပြပါ့မယ်. ဖိုင်ဆိုက်သေးပြီး နာမည်မကြီးလို့များ သွားအထင်မသေးနဲ့နော် သုံးကြည့်လိုက်ဦး. အဲ့ ဒီ့ virus ၀င်လာရင် folder နာမည်တူ .exe format ဖိုင်နာမည်တူ စတဲ့ဟာတွေ အကုန်လျှောက်ပြီး ပေါ်လာပါတယ်. သတ်လို့လဲ မကုန်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ. ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပွားပွား စိတ်မပျက်ပါနဲ့ . သတ်လို့ရပါတယ်. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ အကောင်းဆုံးတစ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်. အရင်တုန်းကတော့ antivirus ၂ မျိုးလောက်နဲ့ သတ်ရုံတင်မကဘူး registry ထဲကိုပါ ၀င်ပြီးပြင်ပေးရပါသေးတယ်. အခုတော့ မလိုတော့ပါဘူး. တစ်မျိုးတည်းနဲ့တင် သတ်လို့ရသွားပါပြီ. အောက်မှာ licence version ကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. kaspersky နဲ့သတ်ဖို့ကြိုးစားတာ သိပ်အဆင်မပြေလိုက်ပါဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ တင်လို့ကို မရလို့ပါ. အဲ့ဒီ့နေရာမှာ မေးစရာရှိပါတယ်. အဲ့ဒါများဗျာ အဲ့ HDD ကို ဖြုတ်ပြီး kaspersky update ဖြစ်တဲ့ စက်မှာ သွားစစ်လိုက်ပေါ့လည်း မပြောပါနဲ့ ကျွန်တော် သတ်ခဲ့တုန်းက အဲ့ဒီ့ laptop က ၀ယ်ထားတာ မကြာသေးတဲ့အတွက် အာမခံ ရှိပါသေးတယ်. အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အထဲက HDD ကို ဖြုတ်လို့မရပါ. virus တော်တော်များများဟာ သူတို့ ကွန်ပျူတာထဲကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တင်ထားတဲံ (သို့)တင်မည့် antivirus program ကို အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင် ပိတ်ထားတတ်ပါတယ်. အခုနည်းလေးနဲ့ ရှင်းပေးလိုက်ပါ. တစ်ခုပဲရှိပါတယ်. virus များရင် သတ်ရတာ လက်ညောင်းမယ် ဒါပါပဲ. ကဲအောက်မှာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကြည့်လိုက်ပါ.
download လုပ်လိုက်ပါ. latest version ပါပဲ. အိန္ဒိယက programmar တစ်ယောက် ရေးထားတာပါ။
install လုပ်လိုက်ပါ. Settings ထဲကိုသွားပြီး General settings ကိုရွေးလိုက်ပါ. ညာဖက်အခြမ်းမှာ Name ..... , Key ........ ဆိုပြီးတော့ တွေ့ပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော် အခုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အထဲက ကြိုက်တဲ့ တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ activate လုပ်လိုက်ပါ လုပ်ပြီးရင်တော့ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ auto update ဆိုတာတွေကို ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ခဏရပ်ထားပြီးတော့ ဘာ program မှ မဖွင့်ပါနဲ့. C:/ ကို အရင်ဦးဆုံး စပြီးစစ်ပါ. virus ကိုပဲ ဖယ်ရှားပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ် program ဘယ်ဖိုင်ကိုမှ မထိခိုက်ပါဘူး. အဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချသာစစ်ပါ. My computer ကိုဖွင့် C:/ ကို ညာဖက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ Scan with Smadav ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ သူ့ဟာသူ စစ်နေပါလိမ့်မယ်. တစ်ချို့ virus တွေဆိုရင် delete လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့အခါကျရင်တော့ delete ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. တစ်ချို့ virus တွေကို Quarantine ထဲကို ပို့လိုက်ပါလိမ့်မယ်. အဲ့ virus မျိုးကျရင်တော့ အမှန်ခြစ်ပေးပြီးတော့ delete သာ လုပ်လိုက်ပါ.
Smadav version.8.8 (2012) (software & key)
Download ifile.it | Mediafire | Download mirrorcreator အပေါ်က ပါလာတဲ့ ကီးနဲ့ မလုံလောက်ရင် အောက်မှာ ထပ်ပြီးတော့ ကီးတွေ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
Download key (ကီးမျှသာ)
ifile.it | Mediafire Read More
Internet download manager 6.07.16 (latest version)
internet download manager ကလဲ အသစ်ထွက်လာလို့ update တောင်းနေပြီ ထင်ပါတယ် . update လုပ်လိုက်လို့ ကီးထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ အဆင်ပြေသွား တဲ့သူတွေရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့သူလဲ ရှိပါလိမ့်မယ် . အဆင်မပြေတဲ့ သူများ အတွက်ကို keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်. အားလုံး အဆင်ပြေ ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
key ထည့်နည်းပထမဦးဆုံး internet download manager ကို install လုပ်. license version ဖြစ်ဖို့ box လေး ပေါ်လာလိမ့်မယ်. တစ်ကယ်လို့ မပေါ်လာခဲ့ရင် IDM ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Menu Bar မှာ ရှိတဲ့ Registration ကို နှိပ်ပြီး ဒုတိယ အကြောင်းက Registration ဆိုတာကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ. first name (ကြိုက်တာပေး) last name (ကြိုက်တာပေး) email (ကိုယ့်မေးဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် 123@gmail.com ဆိုလဲ ရတာပဲ အဆင်ပြေသလိုသာ ထည့်ပေးလိုက် @ ပါဖို့နဲ့ နောက်ဆုံးက .org, .com, .info စတဲ့ဟာတွေနဲ့ ဆုံးရင်ပြီးတာပဲ. မဆုံးလဲ ကိစ္စမရှိဘူး. အခု domain name တွေက စုံပလုံနေတာပဲ ထွက်နေတာ အဆင်ပြေတာသာပေး) အဲနောက်ဆုံးက key ကတော့ အပေါ်ဆုံးက download လုပ်ထားတဲ့ keygen ကို run လိုက်ပါ. အဲ့မှာ generate ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. generate ကို တစ်ကြိမ်မဟုတ်ဘူး အကြိမ် 100 နှိပ်လည်း ကိစ္စမရှိဘူးနော်. ကြိုက်သလောက်နှိပ် တစ်ခါနှိပ်တိုင်း အပေါ်က Registration code က ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်. ပြောင်းပါစေ . အဲ့ဒီ့ပြောင်းတဲ့ နံပါတ်ကို ခုနက တောင်းတဲ့ Registration code ကွက်လပ်မှာ ဖြည့်ပြီး ok ပေးလိုက် ဒါဆိုရင် licence version ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်. (သတိ-avria antivirus program သုံးသူများ ထီးကြီးကို ခဏပိတ်ထားပါ မဟုတ်ရင် keygen ပါသွားပါလိမ့်မယ်) ဟဲဟဲ. kaspersky သုံးသူများကတော့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး. တင်ပေးဖို့ လုပ်နေပါတယ်. Download လုပ်ဖို့သာ ပြင်ထားပါ. ဒီတစ်ခါ တင်ပေးမှာ ခပ်ဆန်းဆန်းတွေချည်းပဲ တင်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်. အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖြစ်အောင်ပေါ့. တစ်ချို့သိပြီးသားလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်. )
Download Filesonic Direct link Read More
Adroit Photo Recovery 2012 (ဓါတ်ပုံချည်းသီးသန့် ပြန်ပြီး recovery လုပ်လိုသူများအတွက်ပါ)
နီတိုးးအစ်ကိုရေ ကျွန်တော်က ဓါတ်ပုံဆရာပါ. အဲ့ဒါ Canon RAW CR2 သုံးပါတယ်. သူက auto format ချလိုက်မိတယ် ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲ ကူညီပါဦးအစ်ကိုရေ. ပြဿနာက အကြီးအကျယ် တက်နေလို့ပါ.
ညီလေးရေ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ နောက်ဆုံးထွက် version တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဘာတွေရသလဲ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ
ရသည့် format type များ· FAT12
ရသည့် device များ· Internal and external hard drives
· USB sticks
· CompactFlash cards
· SD cards
ရသည့် format များနှင့် camera များ· JPEG
· Canon RAW CR2
· Canon RAW CRW
· Nikon RAW Format
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် စုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်. ပို့စ်တွေ တင်ပေးဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတာပါ. စိတ်မပူပါနဲ့. အင်တာနက် ရတော့မှာပါ. :P . ကဲညီလေးရေ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. တစ်ခြားဆိုက်တွေကနေ မရရင် filesonic link ကနေ download လုပ်ပါ direct link ပေးထားပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. လုံးဝ premium account တို့ ဘာတို့မလိုပါဘူး. download လည်း အရမ်းမြန်ပါလိမ့်မယ်. ဖိုင်လဲ လုံးဝ Link သေမှာ မဟုတ်ပါဘူး . အဆင်မပြေရင် chat box ကနေ ပြောခဲ့လို့ရပါတယ်. . Download filesonic
Android phone များအတွက် Zawgyi Keyboard and Font
ကဲ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကနေ ချက်တင်ချက်လို့ရသလို၊ ဖုန်းထဲကနေ ဘယ်ဝဘ်ဆိုက်ကိုမဆို မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဆု...
တင်ထားသမျှ မြန်မာ ebook များ စုစည်းမှု့
ကျနော် ယခုပို့စ်တွေကို အုပ်စုအလိုက် ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ခွဲပြီးတော့ တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ထပ်ပြီးထ...
Download လုပ်နည်းကို တချို့ အစိမ်းသက်သက်သမားတွေ မသိဘဲ ခဏခဏမေးနေကြတယ်။ ဒီပို့စ်လေး ကိုတော့ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပေးပါဗျာ။ ဒါဆိုရင် နားလည်သွားမှ...
နေ့စဉ် Kaspersky keys များ (29 May 2013)
Kaspersky တွေကို ခဏခဏ မေးတတ်ကြလွန်းလို့ မထူးဘူး ဆိုပြီးတော့ အမြဲတမ်း update လုပ်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးမြင်အောင် ထိပ်ဆုံးမှာ ထားလိုက်ပါ...
Computer ပြုပြင်မှု့ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ စုစည်းခြင်း
စာအုပ်အမည် = ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ တိုလီမုတ်စများ ရေးသားသူ = မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သိသင့်တာတွေ...
သင့် email လိပ်စာရိုက်ထည့်ခဲ့ပါ ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း မေးလ်ဖြင့်ပို့ပေးပါမယ်
Software ရှာရန်သုံးပါ ...
Zawgyi (32bit x 64bit)
Canon Printer Resetters
Cracl Keygen Patch and activators
File ပြန်ဖြေမည့် နည်းလမ်းများ
Laptop Driver များ
msi laptop drivers
printer service program
လွယ်ကူလေ့လာ English စာ
မြန်မာ ebooks များ
shortcut တွေ ပုံစံတူလိုက်ပွားနေတဲ့(folder, .exe) v...
Internet download manager 6.07.16 (latest version)...
Adroit Photo Recovery 2012 (ဓါတ်ပုံချည်းသီးသန့် ပြ...
Ifile.it | Mediafire | Mirrorcreator
Filecloud | Mediafire | Sharebeast
~~~~ Win RAR v-4.01~~~~
Ifile.it | Mediafire | Mirrorcreator My tutorials
~~~~ Crack tutorial movie ~~~~
Mediafire | Filecloud | Sharebeast
~~~~ Keygen tutorial movie ~~~~
~~~~ Patch tutorial movie ~~~~
~~~ Serial No tutorial movie ~~~
Design by Nyi Nay Min - Edit by Myanmar Mobile Zone